Ny 18 ka hatramin’ny 24 mey izao ny Herinandron’ny Mpanazava izay fanao isan–taona mba hanehoana ny asa fanabeazana ataony sy hampahafantarana ny momba ny fikambanana ary iarahan’ny fianakaviamben’ny Mpanazava miara-mientana. Lohahevitra voizina amin’izany ny hoe « Mpanazava velona sy miaina ». Noho ny fisian’ny hamehana ara-pahasalamana anefa dia tsy fihaonana no hanamarihana izany, amin’ity taona ity. Fifampizarana talenta sy fahaiza-manao kanto kosa no hatao amin’ny tambajotra sosialin’ny Mpanazava ho fanamarihana izany.
Taorian’ny fangatahana nataon’ny mpianatry ny oniversiten’Antananarivo momba ny vatsy, tonga nizara fanampiana vatsy tsinjo ho azy ireo ny minisitera mpiahy, ny faran’ny herinandro teny Ambolokandrina sy Ravintoto. Nisolo tena ny mpianatra ny fikambanana Mafami ivondronan’ny mpianatra eto amin’ny faritanin’Antananarivo izay nisaotra ny fitondrana. Efa voaray koa ny vatsim-pianarana hanampy amin’izao fihibohana izao
Nanolotra fitaovana ara-pahasalamana mitentina 24 tapitrisa Ar ho an’nyCHU Befelatanana ny Allianz Madagascar sy ny Gaz Industriels de Madagascar ho fiatrehana izao hamehana ara-pahasalamana izao. Ilain’ireo olona tena sahirana amin’ny taovam-pisefoana sy sempotra ireo fitaovana natolotra satria nahitana « oxygène », « humidificateur », « masque oxygène »…Ankoatra ny firongatry ny covid-19, fotoana mahabetsaka indrindra ny kohaka sy ny sery izao ary mitarika amin’ny fahasemporana mihitsy.
Namoaka didim-pitondrana ny prefet -n’ny faritra Atsinanana, mametraka ireo fepetra manokana mahakasika ny fikarakarana razana ao Toamasina, manoloana izao fiparitahan’ny valanaretina izao.
Voarara, araka izany, ny fitondrana razana mivoaka ny distrikan’i Toamasina I na ana habakabaka na an-dranomasina na an-dranomamy na an-tanety. Voarara ihany koa ny fiandrasam-paty, izay mahazatra rehefa misy manjo ka miteraka fitangoronana sy fivorivoriana.
Nandritra ny fivorian’ny tompon’andraikitra ara-pahasalamana sy ny manam-pahefana ao amin’ny CCO Boeny, ny faran’ny herinandro teo no nahafantarana fa misy ny baranahiny eo amin’ny sakana ara-pahasalamana napetraka amin’ny toerana maromaro mialoha ny hidirana ao anatin’ny faritra. Misy olona tafiditra an-tsokosoko ihany any an-toerana ary manao izay fomba rehetra hiafenana sy hamitahana ny mpanao sakana sy mpanao fisavana.